Rita, Writing for My Sake!: ငယ်ဘဝကို လွှမ်းမိုးခဲ့သူများ
Posted by Rita at 9/05/2010 12:01:00 AM
ဆရာဝန်အလုပ်ကို ဝါသနာမပါပဲ ဆရာဝန်လိုင်းယူသွားတဲ့
မှာပါ အများကြီးတွေ့ဖူးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ..၊အဲဒီ အကျိုး
ဆက်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်လေမလဲ...။
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးငိုင်သွားတယ်။ ဘယ်ဘ၀ကို ဒီလောက်မှတ်မိတာ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ ရေးတားလားဟင်။ ကျွန်တော်လဲ အစ်မအရွယ်လောက်တုန်းက စာတွေ သိပ်ဖတ်တာ ကျွန်တော်တို့ မြို့က လူငယ်တွေထဲ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲပဲ စာဖတ်အားအကောင်းဆုံးလို့တောင်ထင်မိတယ်။ ဒီအစ်မကြီးလဲ အတော်ဖတ်သည်ကိုးးး- အခုထိတော့ ကံကောင်းနေတုန်းပဲ မဟုတ်လား။ သူတို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ရင်ကံဆိုးပြီး။ နောက်ထပ် အဲလို သယ်ရင်းတွေထပ်ရရင် ကံကောင်းဦးမယ်ပေါ့.....
လေးထောင့်တွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
ရေးထားတဲ့ ပို့စ် ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။
You also big big girl.
You can make decision what you want.
Most of peoples scare to do something.
Young children in Myanmar got pressure under their parents and educated society.
They lost their playing time.
အမ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ ၁၉၈၅ နှစ်က လသာ (၂) ရဲ့ ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် (အမ သူငယ်ချင်း) နဲ့ အင်တာဗျူး ဆိုပြီး စာစောင်တခုမှာ ပါလာသေးတယ်။ သူ့ကို အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သူက ဖြေထားတာ.."စက်ရုပ်တွေ တီထွင်တဲ့ ပညာရှင် ဖြစ်ချင်ပါတယ်" တဲ့...
အဲ့သူငယ်ချင်းက အမကို ငါလည်း မပြောဘဲနဲ့ အဲ့လိုကြီး ရေးထားတယ်ဟယ်လို့ ပြောပြီး ရယ်လိုက်တာ...
(ဖြိုးသီဟ အင်တာဗျူးကို ဒီလို မဆိုလိုပါဘူးနော်)
မမသီတာ ရေးတာဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
ဦးရဲဝေ ကို ကိုယ်တို့တွေက ဆရာရေဝဲ လို့ အမြဲခေါ်တယ်
ဆယ်တန်း တုံးက မြန်မာစာ သူနဲ့ သင်ခဲ့တယ်
ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ဆရာထဲက တယောက်
ကိုယ်မြန်မာ စာ ၆၇ မှတ်ထွက်ခဲ့တာ ဆရာ့ကျေးဇူးတွေပါတယ်
တာရာမင်းဝေရဲ့ ရေးဟန်တွေ ပါနေတယ်
ကံကောင်းချင်တော့ ကံမကောင်းချင်တော့ ကံကောင်းချင်တော့
ဆရာဝန်တွေ ....ထောင့်မကျိုးတာ တော်တော်များများတွေ့နေမြင်နေရတော့
အထင်မကြီးတဲ့ လူတန်းစားထဲ ထည့်ထားတာ ကြာပြီ
မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တော်တော်များများဟာ ဆရာဝန် စိတ်ဓါတ်ရှိလို့ ဆေးကျောင်းတက်ခဲ့ကြတာမှမဟုတ်ဘဲ
ယုမော် ရဲ့ စကား ကိုသတိရနေမိတယ်
(ဆရာဝန်တွေ ....ထောင့်မကျိုးတာ တော်တော်များများတွေ့နေမြင်နေရတော့
အထင်မကြီးတဲ့ လူတန်းစားထဲ ထည့်ထားတာ ကြာပြီ) <<< ပေါင်မုန့်ကို ထောပတ်သုတ်ပြီး ယမ်းနေပြန်ပြီ။
ပြီးတော့ အဲဒါ တာရာမင်းဝေရဲ့ မူရင်းမဟုတ်ဘူး။ တနေရာရာကနေ ဘာသာပြန်ထားတာ။ သူ့စာတွေထဲမှာ အဲဒါမျိုးတွေ ပါတတ်တယ်။ ဥပမာ - ဘယ်အရွယ်ရှိတဲ့ မိန်းမက ဘာတိုက်ကြီးနဲ့ တူပါတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အစကတော့ သူကိုယ်တိုင်ရေးတာတွေလို့ ထင်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။
ကိုယ်ပြောချင်တာကို လူတိုင်း နားလည်နိုင်တဲ့ ဥပမာနဲ့ ပေးတာပါဟာ...။
နေရာတိုင်းတော့ ဘယ် apply ဖြစ်မှာတုန်း...။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ မိဘတွေရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ တကယ်ဝါသနာမပါဘဲ အမှတ်မှီလို့ ဆေးကျောင်းတက်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ ရာနှုန်းပြည့်တောင် ရှိခဲ့မယ်ထင်တယ်။ ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀က ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုနေခါတော့ ဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့တာ သိပ်ကံကောင်းတာပဲလို့ အမြဲတွေးမိတယ်။
ရီတာရေးထားတာဖတ်ပြီး ကိုယ့်မောင်လေးအကြောင်း သတိရမိလို့ ထည့်ရေးချင်တယ်။ သူကငယ်ငယ်က ကိုယ့်လို ဆရာဝန်ဘာညာလုပ်မယ် မပြောဘူး၊ ယောကျာ်းကလေးပီပီ စစ်ဗိုလ်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာလုပ်တမ်း ကစားတာမျိုးတော့ရှိတယ်။ တကယ်တမ်း ဆယ်တန်းအောင်ပြီးလို့ ဂျီစီးအီးသွားတက်တဲ့အချိန်မှာ ကွာခြားတဲ့ပညာရေးစနစ်ကြောင့် သူဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်သေသေချာချာ သိသွားတယ်။ သူက ရူပဗေဒနဲ့ သင်္ချာကို သာမန်ထက်စိတ်ဝင်စားသွားပြီး သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ချင်သွားတာ။ အဲဒီ့အချိန်မှာ သူက ၁၆နှစ်၊ ကိုယ်က ၂၁နှစ်။ သူပြောပြီး ကိုယ်စဉ်းစားမိလိုက်တာ ... ပညာရေးစနစ်ကွာဟမှုကိုပဲ။
ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်၊ ဘာလုပ်ချင်၊ ဘာကိုစိတ်ဝင်စားနေသလဲဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာမှ ကိုယ်တိုင်သိမြင်ခံစားနိုင်တာ မဟုတ်လား။ တော့တိုးကျန်ထဲမှာလည်း ကိုယ်တို့ဖတ်ဖူးတာပဲလေ။
တကယ်ဝါသနာမပါဘဲ ဆရာဝန်လုပ်ခဲ့သူတွေ၊ ဆရာဝန်ဖြစ်ရဲ့သားရဲ့ ဆရာဝန်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့သူတွေကြောင့် တကယ်ဖြစ်ချင် လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် နစ်နာသွားတဲ့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်တစ်ခြားတစ်နေနေရာမှာ ထူးချွန်သွားရမယ့် ဆုံးရှုံးမှုကို နှမြောမိတာ အမှန်ပဲ။
အဲဒီ တစ်ယောက်လည်း ခုတော့ ဆရာဝန် ဘဝထဲမှာ အသားကျနေပြီ နေမှာပဲနော်..
ကိုယ်ကတော့ ဆရာဝန်လိုင်း မမှီခဲ့တာကို ကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်.. မှီခဲ့ရင် ငြင်းဖို့ အင်အားမရှိပဲ လုပ်နေရမှာ စိုးလို့ပါ။
ဖြိုးသီဟ က လူတော်တယောက်ပါ
သူဟာ ရောက်တဲ့ နေရာမှာ တော်အောင်ကျိုးစားနိုင်တဲ့လူပါ
သိတဲ့လူ တစ်ယောက်ယောက် ပေါ်လာလိမ့်မလား စောင့်နေတာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခု ဘယ်မှာများ ရောက်နေလဲ မသိဘူးနော်။ ဦးခင်မောင်မြင့် ဆုံးတဲ့ချိန်ထိတော့ သူ မြန်မာပြည်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။
ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ့်သူလို့တော့ ခံစားမိပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်တဲ့ ရီတာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးက တစ်ခြားသူတွေ ရေးလေ့ရေးထရှိတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ ရီတာရေးလိုက်တော့ ဇွန်တို့လည်း ခံစားမိသလောက် share ခွင့်ရတယ်။
မနက်က တစ်ခုသွားသတိရလို့။ ၁၉၉၃ခုနှစ်တုန်းက အထက်တန်း ၀ိဇ္ဇာတွဲမှာ တစ်ပြည်လုံးပထမရခဲ့တဲ့ မကေခိုင်ငြိမ်းက ၈တန်းမှာ ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့ပေမယ့် ၀ါသနာအရ အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲ အထူးပြုလေ့လာချင်သူမို့ ၉တန်းမှာ ၀ိဇ္ဇာတွဲကို ပြောင်းပြီးယူခဲ့တာ။ ဇွန်တို့ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ သူ့အကြောင်းဖတ်ရတော့ အံ့သြမိသေးတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တော်တော်လေးစားသွားတယ်။ ကိုယ်သာဆို ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ့မလားလို့။ သားသမီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နားလည်လက်ခံပေးတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့လေ။ ဇွန်သိသလောက် သူ့မိဘတွေက ပညာရေးနယ်ပယ်ကပဲ။ အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။
နောက်အစ်မတစ်ယောက်ကလည်း ဇွန်တို့အထက်တန်းကျောင်းကပဲ။ ဆယ်တန်းမှာ ဆေးကျောင်းအမှတ်မှီပေမယ့် ၀ါသနာအရ စက်မှုတက္ကသိုလ်ပဲလျှောက်ပြီး ပထမနှစ်အထိ သင်ယူခဲ့သေးတယ်။ ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ လောကီပညာရပ်ကို အပြီးစွန့်လွှတ်ပြီး လောကုတ္တရာနယ်ပယ်ထဲကို ၀င်သွားတာ။ လောကုတ္တရာစာမေးပွဲတွေမှာလည်း ဖြေတိုင်း ပထမဆင့်နဲ့ပဲ အောင်မြင်ခဲ့တာ။ သူယုံကြည်ရာ ဆန္ဒရှိရာလမ်းကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းသွားတာ တကယ့်ကို ချီးကျူးစရာပါ။ (လူအမည် - မမြစိန်စီကျော်၊ သီလရှင် ဘွဲ့အမည်က မစာရုဒဿနီပါ)
ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာ တိတိကျကျသိပြီး အများနဲ့မတူတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ရအောင်ဖြစ်အောင် လုပ်သွားနိုင်သူမျိုးတွေကို တကယ်ပဲလေးစားအားကျမိတယ် ရီတာ။ သူတို့တွေက ဇွန့်ကို တနည်းတဖုံ လွှမ်းမိုးခဲ့သူတွေဆို မမှားပါဘူး။
ပေါင်မုန့် ကိုလျောက်ရမ်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဒေါ်ရီတာ
တတွေ့နေရတာတွေ က တော်တော်များများ အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါ
ခက်တာက ကိုယ်ကလည်း တော်တော်များများ ကိုတွေ့နေရတဲ့ field ထဲရောက်နေတာခက်တယ်
ကာလသားကုနေတဲ့ ဆရာဝန်က STI/STD (sexually transmitted infection and diseases)ဆိုတာ ကို မသိရင်၊
လိင်တံက အရည် တစက်စက်ကျခြင်း dripping ကို dribbing လို့ ဆေးစားအုပ်ထဲမှာ မှားပေါင်းနေတာတွေကို တွေ့လာရင် ကိုယ်ပြောချင်တာကို သိလာပါလိမ့်မယ်
အမှန်ဆို အဲ့စာလုံးပေါင်းက ဆေးပညာနဲ့တောင်မပြောဘဲ ရိုးရိုး အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တောင် မမှားသင့်တာပါ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းမှာ အမှတ်အများဆုံးနဲ့ အောင်ခဲ့ကြလို့ ဆေးကျောင်းရောက်ခဲ့ကြတာမှလား
ခုလဲ အမ်ဘီအေ တွေတက်ကြပြီး အင်တာဗျူးလာတာမှာ အင်္ဂလိပ် လို ပြောတာ သဘောမပေါက်လို့ ဘာသာပြန်ပြရတယ် ဆိုတာတွေ
ကဲ ပိုစ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လွဲနေပြန်ပြီနော်
we don't really have choices upon 10th std result,do we?
Even if we r eligible to choose,there is no support/career/future except some professional courses.
We are already used to be in no choice/right..
nc ပြောတာ မမှားပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်တို့ လူလုပ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်အခါက ရွေးစရာ ဘာမှ မရှိလှပါဘူး။ ခုရော ရှိပြီလားဆိုတော့ မရှိသေးဘူး။ မြို့ပြကြီးမှာ (အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်နေ အမြင်ကျယ်တဲ့လူတန်းစားအတွက် - အထူးသဖြင့် ထည့်ပြောရတာက ရန်ကုန်မှာ တသက်လုံးနေပြီး ဘာမှ မမြင်တတ်တဲ့လူတန်းစားက သပ်သပ်ကို ရှိလို့) ဆေးတက္ကသိုလ်ခေတ်ကနေ စင်ကာပူပေါ်လီခေတ်ကို ပြောင်းလာတာတော့ ရှိတယ်။ ဒါက တနည်းအားဖြင့် ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားတာပဲ ရှိတယ်။ အနှစ်သာရကတော့ ဘာမှ ထူးခြားမပြောင်းလဲဘူးလို့ မြင်မိတယ်။
ခု post ထဲမှာ ပါတဲ့ ဖြိုးသီဟကိုယ်တိုင်လည်း အခြေအနေကို မလွန်ဆန်ဘဲ (သူကိုယ်တိုင် ပြောသွားတဲ့စကားက "ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်နေတာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာမှာ ဖြစ်နေတာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာကိုပဲ ရွေးချယ်ပါမယ်" တဲ့) ရွေးခဲ့တာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူ့လုပ်ရပ် (တနည်း သူ့ရွေးချယ်မှု) နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကိုယ် အသေအချာ ခံစားယုံကြည်မိတဲ့ တစ်ချက်ကို ပြပါဆိုရင် သူက သူ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကို အသေအချာသိတယ်။ သူ့ပြောစကားတွေမှာ အဲဒီအချက်က သိသိသာသာပါတယ်။
သူ ဆေးကျောင်းရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း သူ့အနေအထား ဘယ်လို ဆိုတာကို ကိုယ် မသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အထက်မှာတော့ တစ်ယောက် comment သွားပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်မိတယ်။
ဆိုလိုတာက သူ စိတ်မဝင်စားလှပါဘူးလို့ ကျောင်းသားဘဝက ထင်ခဲ့တဲ့ နယ်ပယ်ထဲမှာ သူ ဘာကြောင့် ထူးချွန်သလဲဆိုရင် သူဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကို သူ့ဘာသာ သေချာသိနေလို့ပဲ။
အဓိကက ကိုယ်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကို သေချာ "သိ" နေရမယ်။
ကိုယ် ဘာဖြစ်လို့ ဒီစကားပြောတာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာမှန်းညာမှန်းမှ မသိဘဲနဲ့ ရောယောင်နေတာကို တွေ့နေရလွန်းလို့။ အဲဒါဟာ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကလည်း အများကြီးပါတယ်။
နောက်တချက် ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောချင်သေးတယ်။ (ကြားဖြတ်ပြီး ပြောရရင် nc ဒီ comment ကို ရေးလာတဲ့အတွက် တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)။ မြန်မာပြည်အနေအထားအရ ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတာကို ခဏခေါက်ထားလိုက်ဦး။ အဲဒါက နောက်တဆင့်ဖြစ်နေလို့။ ရွေးချယ်ခွင့် မတိုင်ခင်မှာ အဆင့်တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက ကိုယ့်ဘာသာ သိခွင့် ပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာ သိပြီးတဲ့နောက်မှ ဘာရွေးချယ်မလဲ ဆက် စဉ်းစားလို့ရမှာ။
ပြန်ဆက်ရရင် မြန်မာပြည်အနေအထားအရ ကျောင်းသားဘဝမှာ ကိုယ့်ဘာသာ သိခွင့်ရဖို့ ဘာအခြေအနေ အခွင့်အလမ်းမှ မရှိဘူး။ အင်မတန့် အင်မတန် ကံကောင်း ပါရမီကောင်းတဲ့တချို့မှသာ ကိုယ် ဘာလဲဆိုတာကို သိခဲ့ကြတာ။ အတော်များများဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဝါးတားတားချည်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ကျောင်းပညာရေးဟာ လက်တွေ့နယ်ပယ်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်စပ်မှု သိပ်နည်းလို့။
ဒါပေမဲ့ ဒီ post ကို တင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းကတော့ အဲဒီကိစ္စတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့် ငယ်ဘဝနဲ့ ငယ်ငယ်က အလေးအနက် သိမြင်ကြားဖူးခဲ့တဲ့ စီနီယာတွေအကြောင်း အမှတ်တရ ပြန်မှတ်ထားလိုက်ချင်လို့ပါပဲ။
နောက်ထပ် ဆက်ရေးရမယ့် လူ နည်းနည်း ရှိသေးတယ်။ ပျင်းနေတာရော၊ အချိန်မရတာရော၊ ကိုယ့်အတွက် ရေးသင့် မရေးသင့် ချိန်ဆရတာတွေရောကြောင့် မဖြစ်သေးတာ။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အချက်ကို နောက်တပိုင်း နောက်တယောက်အကြောင်း တင်ဖြစ်ခဲ့ရင် ပိုပြီး မြင်သာလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
Phyo Thiha now becomeaphysician and working in North Okalarpa General Hospital.
I heard that he got married but still I couldnt meet him the last time I arrived to Ygn.
ကျေးဇူးပါ။ သတင်းကြားရတာအတွက်။ ဒါဆို နိုင်ငံခြားမထွက်သေးဘူးပေါ့။
I was in the trend of poly too.We were WRONG about studying in abroad would make ease us to another higher stage of lives.Yes,it DID so & I'm always glad but in terms of realizing "what I am" & "what I want to be" to further advanced.
So,apart from all OTHER ASPECTS if there is no opportunity,a youth should flow with the trend in search of WISDOM in my opinion..
Thanks for your point of how important parents/relatives & environment are forachild that i was about to ask..
May every single good day be with u,Rita..